Rag hubaysan oo maanta weeraray xawaaladda Kaah Bossaso, dhac iyo dilna geyaystay. – Radio Daljir
Rag hubaysan oo maanta weeraray xawaaladda Kaah Bossaso, dhac iyo dilna geyaystay.
Maarso 27, 2013 3:59 g 0
Bossaso, Mar 27 – Dabley hubaysan ayaa maanta barqadii weeraray xaruntii xawaaladda Kaah ay ku lahayd magaalada Bossaso, kuwaasi oo geystay falal iskugu jira dil iyo boob hanti lacageed.
Wararka duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha dhabta ee weerarka xawaaladda lagu qaaday iyo caddadka hantiga la boobay, waxaana warar qaar tilmaamayaan mid ka mid ah illaaladii xawaaladda in uu dhintay labo ruux oo kalena ay dhaawacmeen, isla markaana la qaaday lacag aan wali si dhab ah loo helin tiradeeda.
Maamulka isbitaalka oo uu Radio Daljir la hadlay ayaa sheegay dadka dhintay in ay yihiin labo ruux, halka dhaawacuna uu yahay labo kale, kuwaasi oo haatan lagu dabiibayo isbitaalka guud ee magaalada Bossaso.
Dad goob-joogayaal ah ayaa sidoo kale Daljir u sheegay ragga weerarkaasi geystay in ay ahaayeen saddex illaa afar nin, kuwaasi oo baskoolado ku hubaysanaa, weerarka iyo rididda rasaastana ay bilaabeen kaddib markii ay gudaha u galeen xarunta xawaaladda, ayna raasaastii ugu horraysay la beegsadeen waardiyihii xawaaladda Kaah oo fadhiyey kadinka gudaha ee xawaaladda laga soo galo.
Isla markiiba raggaasi waxaa la tilmaamayaa in ay lug goobta uga baxsadeen, illaa iyo haatan si rasmi ah looma aqoonsan jihada ay ka yimaadeen iyo cid ay ka tirsanaayeen midna, waxaana socota baaritaanno boolis oo lagu baadi-goobayo raggaasi sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil amni oo aan la hadalnay.
Waa weerarkii koowaad oo noociisa ah oo ka dhaca magaalada Bossaso inta la xasuusto, laguna beegsado xarun xawaaladeed ama shirkad ganacsi oo si gaar ah loo leeyahay.
Caawa iyo Daljir -Khamiis,March 28-2013, Khadar Cawl Ismaaciil ( Daljir Buuhoodle )
Caawa iyo Daljir, Salaasa, march 26-Cabdiweli Maxamed Shiikh ( Daljir Garoowe)